Kunemibandela eminingi ukukhishwa endaweni yokuquba – Bayede News
Kunemibandela eminingi ukukhishwa endaweni yokuquba
KWESINYE isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo uMehluleli uPretorius
Posted on 22/11/2018 03/12/2018 by Bayede-News
KWESINYE isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo uMehluleli uPretorius AJ wacacisa ngokubaluleka kokungenelela kohlaka lukaHulumeni esimweni lapho umuntu noma umphakathi ukhishwa khona endaweni obuhlala kuyo.
INkantolo YoMthethosisekelo yayicacisa ngokubaluleka kokuthi umuntu atholelwe enye indawo. Ecaleni likaBaron and Others v Claytile (Pty) Ltd and Another 2017 kwaqala kuwudaba olujwayelekile lokususwa kwabantu. Okokuqala umqashi iClaytile (Pty) Ltd, walandela imigudu efanelekile njengoba kubeka i- Extension of Security of Tenure Act 62 of 1997 (ESTA) ngokukhipha ababengabasebenzi bakhe ngaphambi kokuba besule emsebenzini noma inkontileka yabo inqanyulwe.
Okwesibili umyalelo wokukhishwa kwabo endaweni wakhishwa futhi lokho kwaqinisekiswa nayiNkantolo Yezomhlaba iLand Claims Court. Okwesithathu labo ababengabasebenzi banqaba ukuphuma endaweni ababehlala kuyo baqhubeka nokuhlala bhusende betamuza ugesi namanzi amahhala iminyaka emihlanu yonke njengoba isivumelwano sokuqashwa kwabo sasihambisana nokuthi bahlinzekwe ngendawo yokuhlala, kodwa isivumelwano sase sinqanyuliwe ngoba bengasasebenzi kule nkampani.
Okwenza leli cala libaluleke ukuthi lithinta ngqo isicelo nokutolikwa komthetho i-Extension of Security of Tenure Act 62 of 1997. Izinkantolo zethu azikabi nalo ithuba lokuhlahla kabanzi lo Mthetho njengoba zenzile kweminye ehambisana nawo njengePrevention of Illegal Eviction ne-Unlawful Occupation of Land Act 19 of 1998.
Kulolu daba uMasipala waseKapa wakuveza ezikhathini ezimbili ukuthi wawungenayo indawo yokuhlalisa laba basebenzi futhi awuboni lokhu kuzokwenzeka ngisho nangesikhathi esizayo okuyinto eyabonakala iphambana noMthethosisekelo iSigaba 26 sawo esithi,” Wonke umuntu unelungelo lendawo yokuhlala esezingeni. Umbuso kumele uthathe izinyathelo ngezinsiza onazo ukwenza isiqiniseko sokuthi leli lungelo liyafezeka.
UMasipala wabuye waveza ukuthi abantu ababehlangabezana nazo zonke izidingo zokutholelwa enye indawo banikezwa izindlu zesikhashana endaweni eyahlonzwa uMasipala, nabo kuyokwenzeka okufanayo uma indawo itholakala.
Isinyathelo sikaMasipala sabeka esimweni esinzima umqashi ngoba kwakudingeka aqhubeke nokukhoselisa abasebenzi epulazini lakhe. Abasebenzi base beqashwe kwenye indawo kungasekho lutho abalufakayo kumqashi wabo omdala.
Ngokuhamba kwesikhathi uMasipala waseKapa wabanika indawo yesikhashana eBlikkiesdorp. Abasebenzi bayinqaba leyo ndawo ngoba bethi inegumbi elilodwa futhi yakhiwe ngokusansimbi iphinde ingabi nawo ugesi.
Umbuzo omkhulu owaqubuka ngothi benziwa kanjani ubulungiswa phakathi kwabasebenzi abangenazo izindawo nalabo abanikezwa izindawo zokuhlala kodwa ezingekho esimweni abasijwayele. Kujwayelekile ukuthi abantu abasuswayo endaweni bayichithe indawo yesikhashana abasuke benikwa yona. Kuleli cala kungashiwo ukuthi uMasipala wayilandela imigudu futhi wahambisana nesibopho soMthethosisekelo ngokuhlelela abantu indawo, ukuthi leyo ndawo bayichitha sekungolunye udaba. Kanti empeleni yini okwase kudingeka ukuthi uMasipala uyenze ukuze ugcwalise lokho okukuMthethosisekelo.
Ilungelo lokuba nophahla ekhanda liyilungelo elisemqoka kakhulu futhi elingeke lashaywa indiva.
UTania Calitz uneziqu zezomthetho iLLB (cum laude) (UFS) ungummeli enkampanini iMacRobert Inc ePitoli
Posted in Ukusebenza koMthetho